यसकारण सलमान खान जीवनभर बिहे गर्न चाहन्न , बुवा सलीमले खोले पहिलोपटक यस्तो र’हस्य – Online Nepalaja
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान ५० वर्ष नाघिसकेका छन् । तर पनि उनलाई संधै गरिने एउटा प्रश्न हो । विवाह कहिले गर्ने ? ब्यवसायीक जिवनमा निकै सफल अभिनेता सलमानको ब्यक्तिगत र प्रेम जिवन भने सुखमय भएन । उनको धेरै नायीकाहरुसंग नाम जोडियो तर सबैले उनलाई छोडे ।
पछिल्लो समय कैट्रीना क्याफसंग नजिक रहेका सलमानसंग उनको सम्बन्ध पनि लामो समय टिकेन । उनीहरु अहिले राम्रो मित्र भएपनि दुवै जना प्रेममा भने छैनन् । उनको फ्यानको उनीप्रतिको क्रेज यस्तो छ कि सलमानको जुनसुकै फिल्म रिलिज भएपनि सुपरहिट भइहाल्छ ।
उनी विग बसमा पनि ब्यस्त छन् । त्यसले पनि उनको चर्चा चुलिएको छ । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ हो । ५० वर्ष उमेर भैसक्दा पनि उनको बिहेको विषयलाई लिएर अनेक अन्दाज लगाइएको पाइन्छ । कहिले सलमान कैटरीनासँग, कहिले यूलियासँग बिहे गर्दै भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ ।
तर सलमान खानका बुवा सलिमले भने सलमानको विवाहको बारेमा नयाँ खुलासा गरिदिएका छन् । सलीम खान (सलमानका पिता) ले भनेका छन्, ‘सलमानलाई बिहेको दबाब नदिँदा नै राम्रो हुन्छ किनकी उसले जीन्दगीभर एक्लै रहने फैसला गरिसकेको छ ।’ऐश्वर्यासँग ब्रेकअप भएपछि सलमानको माया–प्रेममा विश्वास लाग्न छाडेको बताइन्छ । यसकारण उनले कहिल्यै बिहे नगर्ने फैसला लिएका हुन् ।
साथै सलमान खानले एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ताका क्रममा पनि आफुले कहिल्यै विवाह नगर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको अर्को कारण उनले वर्षौ देखि खेप्दै आएको एउटा मु द्दा पनि हो । हरिण सम्बन्धी मु द्दा विचाराधीन छ जसका कारण उनी वर्षेनी जस्तो अदालतको ढोका गइरहन्छन् । त्यसको के निर्णय आउँछ भन्ने कुनै अनुमान छैन । त्यसैले उनी आफ्नो जिवनमा कुनै महिलालाई ल्याएर उनको पनि जिवन अलमल पार्न चाहन्नन् ।
Prevएकै घरका दिदि भाई बीच घिनलाग्दो प्रेम भै बिवाह गरेर भागेपछि, तुरुन्तै खोजि जेल हाल्दिनुस भन्दै आमा रुँदै मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextलाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम
विनयजंगको घरमा पुग्दा यस्तो विजोग….अझै किन पक्राउ परेनन् विनयजंग ? कहाँ लुकेका छन् ?(हेर्नुहोस भिडियो)